Pro ကဲ့သို့ ရှယ်ယာများ ရောင်းဝယ်နည်း လေ့လာရန် | ဇွန်လ 2022 လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အစုရှယ်ယာများအားမည်သို့ရောင်းဝယ်ရမည်ကိုလေ့လာပါ - Beginners Full Guide!
ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပုံကိုလေ့လာရန်ရှာဖွေနေပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်၍ အတော်အတန်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေခြင်းသည်မဆန်းပါ။ မသိသောသူများအတွက်သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများတစ်ခုတည်းသည်လေ့လာသူကုန်သည်ကိုအဝေးသို့သွားရန်လုံလောက်သည်။
ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှု၏ အဝင်အထွက်များ အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ပုံကို လေ့လာပြီးသည်နှင့် အကျိုးအမြတ်များသည် ကြိုးပမ်းရကျိုးနပ်ကြောင်း သင်သဘောပေါက်ပြီး မကြာမီ အချိန်ကြာမည်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် - မှန်ကန်သောအချက်အလက်များဖြင့် အစုရှယ်ယာများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည် လုံးဝရှုပ်ထွေးနေစရာ မလိုပါ။
စတော့ရှယ်ယာများသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုကိုယ်စားပြုသောအာမခံဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုရှယ်ယာပုံစံဖြင့်ဝယ်ယူသည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်အများပြည်သူသိရှိလာသောအခါကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ယူရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ မည်သူမဆိုဤအစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ယူနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီတွင်အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်သည်။
အကြောင်းပြချက်များစွာကြောင့်ကုမ္ပဏီများသည်အများပြည်သူသို့သွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပိုက်ဆံစုဆောင်းရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်သူများကိုအမြတ်အစွန်း (သို့) နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်မဟာဗျူဟာအနေဖြင့်ပေးအပ်ရန်လိုအပ်သည်။
၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဆိုသည်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ငွေရေးကြေးရေးအစီအစဥ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အနာဂတ်တွင် ပြန်လာရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် စွန့်စားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိုအရာများနှင့်အတူရှယ်ယာ 'ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း' နှင့် 'ကုန်သွယ်ခြင်း' တို့သည်ကွဲပြားခြားနားကြသည်။
အခါသင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုတွင်သင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုခု၏ရှယ်ယာများကိုသာအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကိုင်ထားရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် ၀ ယ်ရန်သာရှာနေသည်။ ထိုကာလအတွင်းသင်အမြတ်ဝေစုများစုဆောင်းရန်မျှော်လင့်လိမ့်မည်၊ အကယ်၍ အရာအားလုံးအဆင်ပြေလျှင်ရှယ်ယာများကိုအမြတ်အစွန်းဖြင့်ရောင်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုသို့သောနည်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ငွေရှာရန်မျှော်လင့်ပါကသင်၏အကောင်းဆုံးကစားနည်းမှာရိုးရာစတော့အိတ်ချိန်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, မျှဝေပါ ကုန်သွယ် ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏အစုရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုအတော်လေးရေတိုအခြေခံဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Facebook ကရှယ်ယာတန်ဖိုးများမြင့်တက်လာမည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်ဟုဆိုပါစို့။
ဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရဲ့ဗန်းစကားထဲမှာ၊ သင်က Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။ သင်သည် Facebook ၏အစုရှယ်ယာပေါင် ၁၀၀၀ ကို ၀ ယ်ယူပြီးအမြတ်အစွန်း ၂% ရရှိရန်နာရီအနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းတို့ကိုရောင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်။
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာရှယ်ယာတွေတန်ဖိုးကျသွားမယ်၊ ဒါမှမဟုတ်“ bearish” လို့ထင်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာရှယ်ယာတွေကိုတိုတောင်းအောင်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီ၏တန်ဖိုးကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်အမြတ်အစွန်းရရှိစေသည်။
ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုမှတဆင့် ငွေရှာရန် နည်းလမ်းနှစ်သွယ်မှာ-
အစုရှယ်ယာတစ်ခုကို သင်ဝယ်သည်ထက် မြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချခြင်းဖြင့် ရှည်လျားသော အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည်။
အစုရှယ်ယာတစ်ခုကို သင်ရောင်းသည်ထက် လျှော့စျေးဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းဖြင့် တိုတောင်းသော အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည်။
ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးကိုလေ့လာရန်အတွက်သင်ဤချဉ်းကပ်နည်းနှစ်မျိုးကို ဦး စွာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
အရိုးရှင်းဆုံးပုံစံဖြင့်ရှယ်ယာများရောင်းဝယ်ခြင်းသည်သင်သည်စျေးနှုန်းများမြင့်တက်ရန်မျှော်လင့်သောရှယ်ယာများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သင်ကရှယ်ယာများကိုပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချရန်မျှော်လင့်နေသောကြောင့်၎င်းသည်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်။
သင်သည် XYZ ရှယ်ယာများအပေါ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ပွဲစားနှင့်အတူ“ ၀ ယ်ယူ” အမိန့်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။
သင်သည် XYZ ၏ အစုရှယ်ယာ ၁၀၀၀ ကို ဒေါ်လာ ၁၀ ဖြင့် ဝယ်ယူကာ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ကုန်ကျသည်။
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် XYZ ၏ရှယ်ယာများသည် $ 10.50 စျေးရှိသည်။
ထို့နောက် ပွဲစားနှင့် "ရောင်း" မှာကြားပြီး $10,500 ဖြင့် ရောင်းချပါ။
သင်၏အသားတင်အမြတ်မှာဒေါ်လာ ၅၀၀ အနုတ်ကော်မရှင်ဖြစ်သည်။
သင်ကြာသွားသောအခါ၊ သင့်အမြတ်အစွန်းအလားအလာသည် အကန့်အသတ်မရှိ မြင့်တက်လာနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် သီအိုရီအရ၊ သင့်အမိန့်သည် မည်သည့်တန်ဖိုးအထိ တက်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်၊ နေ့စားကုန်သည်များသည် သေးငယ်သော အမြတ်အစွန်းများကို ရယူခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရှယ်ယာရာထူးများကို မိနစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် နာရီပိုင်းအတွင်း ထွက်ခွာလိုကြသည်။.
တစ်ဖက်တွင် အကယ်၍ အစုရှယ်ယာပမာဏပမာဏကျဆင်းပါကသင်အရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။
အစုရှယ်ယာတစ်ခုကိုအတိုချုံးလိုက်ခြင်းသည်ကုန်သည်အများစုအတွက်ရှုပ်ထွေးလေ့ရှိပြီးအယူအဆမှာ၎င်းတို့ကိုပထမဆုံးရောင်းဝယ်ရန်ဖြစ်သည်။ တိုတောင်းသောကုန်သည်များအနေဖြင့်အစုရှယ်ယာများကို၎င်းတို့ရောင်းလိုက်သောစျေးနှုန်းထက်နိမ့်သောဈေးဖြင့် ၀ ယ်နိုင်လျှင်အမြတ်အစွန်းရရှိသည်။ ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များတွင်, သင်ရောင်းချလည်းဝယ်နိုင်။
XYZ ရှယ်ယာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေလျှင်သင်၏ပွဲစားနှင့်အတူ“ sell” မှာထားပါ။
အကယ်၍ ရှယ်ယာတန်ဖိုးကို ၁၀ ဒေါ်လာနှင့်သင်ရှယ်ယာ ၁၀၀၀ ရောင်းလျှင်၊ သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ လက်ခံရရှိသည်။
ဒါပေမယ့်အဲဒါကမင်းရဲ့ပိုက်ဆံမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီအစား၊ သင့်အကောင့်ကသင့်မှာရှယ်ယာ ၁၀၀၀ ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြလိမ့်မယ်။ သင်ဤအစုရှယ်ယာ ၁၀၀၀ ကိုပြန်လည်မ ၀ ယ်မှီတိုင်အောင်၊ သင်သည်ဤကုန်သွယ်မှု၌အမြတ်သို့မဟုတ်အရှုံးရှိမရှိကိုသင်မသိပါ။
အကယ်၍ ရှယ်ယာတန်ဖိုးသည်ဒေါ်လာ ၉.၅၀ သို့ကျလျှင်သင်၏ပွဲစားနှင့်“ Buy” အမှာစာကိုသင်ထားပါ။
ထိုရှယ်ယာ ၁၀၀၀ အတွက်သင်ဒေါ်လာ ၉၅၀၀ ပေးရမည်။ ဤသည်ကသင့်အားအမြတ်အစွန်းဒေါ်လာ ၅၀၀ အမြတ်ရရှိစေသည်။
ဤအကြောင်းများကြောင့်၊ ရိုးရာစတော့ပွဲစားများသည် တိုတောင်းသောကုန်သွယ်မှုကို ခွင့်မပြုပါ။ အဲဒါကြောင့် CFD ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ တိုတောင်းသွားအောင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက် ရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးပလက်ဖောင်းတွေဟာ နေ့စားကုန်သည်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်းတွင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေပါကယနေ့အကောင်းဆုံးဝေစုကုန်သွယ်ရေးဆိုဒ်များကသင့်အားထောင်နှင့်ချီသောရှယ်ယာများကိုဝင်ခွင့်ပေးသည်။ ဤသည်ကသင်သည်အမျိုးမျိုးသောစတော့ရှယ်ယာ CFDs အစုစုကိုဖန်တီးရန်ကူညီသည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရောင်းအ၀ယ်အများဆုံး စတော့အိတ်ချိန်းများထဲမှ တစ်ခုအနေဖြင့်၊ အွန်လိုင်းပွဲစားတိုင်းနီးပါးသည် သင့်အား NYSE သို့ အကန့်အသတ်မရှိ ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် ပါဝင်သော အကြီးဆုံး blue-chip ကုမ္ပဏီများကို သင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဒစ္စနေး, ဖို့ဒ်မော်တာ, JP Morganနှင့်ပိုပြီး။
NASDAQ သည် အဓိကအားဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နည်းပညာကုမ္ပဏီများကို အဓိကအကျုံးဝင်သည်။ Apple, Facebook က, Netflix နဲ့, Microsoft ကနှင့်အခြားသူများ။
LSE သည်ဗြိတိန်အခြေစိုက်ထင်ရှားသောကုမ္ပဏီအားလုံးကိုလက်ခံသည်။ ဗြိတိန်စီးပွားရေးနှင့်ထိတွေ့ချင်လျှင် LSE သည် British American Tobacco, Barclays, HSBC, BP ​​နှင့်အခြားအရာများရှိသည်။ FTSE 100 သည်ယူကေစျေးကွက်အတွက်နောက်ထပ်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည် LSE တွင်စာရင်းပြုထားသည့်အကြီးမားဆုံးကုမ္ပဏီ ၁၀၀ ကိုဖော်ပြသောအညွှန်းဖြစ်သည်။
TSE ကအာရှစီးပွားရေးကို Mitsubishi၊ Toyota၊ NIPPON နှင့် SoftBank ကဲ့သို့ကြီးမားသောကစားသမားများနှင့်ထိတွေ့စေသည်။
A Contract for Difference (CFD) သည် ကုန်သည်များ စတော့ရှယ်ယာများ၏ မြင့်တက်လာခြင်း သို့မဟုတ် ကျဆင်းခြင်းအပေါ် မှန်းဆနိုင်စေသော ဆင်းသက်လာသော ကုန်သွယ်မှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် CFD များမှတစ်ဆင့် ရောင်းဝယ်သည့်အခါတွင် သင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေသော စတော့ကို သင်မပိုင်ဆိုင်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ CFDs များသည် စတော့၏အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကို မှန်းဆနိုင်စေပါသည်။
အားနည်းချက်မှာ၊ သင်သည်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏အခွင့်အရေးများကိုခံစားပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ အဲဒီအစား, သင်ပေးဆောင်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောသို့မဟုတ်နိမ့်သောစျေးနှုန်းအဘို့အစတော့ရှယ်ယာရောင်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်သင်လုပ်မြို့တော်အကျိုးအမြတ်မှတဆင့်ငွေရှာပါလိမ့်မယ်။
Leverage ဆိုသည်မှာကုန်သွယ်မှုယန္တရားတစ်ခုဖြစ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုးထက်လျော့နည်းစွာပေးဆပ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏စျေးကွက်ထိတွေ့မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်သင်၏ရှယ်ယာအရောင်းအ ၀ ယ်အမိန့်၏အစိတ်အပိုင်းကိုအကြွေးဖြင့်လွယ်ကူစွာချထားပေးနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် စတော့ရှယ်ယာတွင် $10,000 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသော်လည်း သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တွင် $5,000 သာရှိသည်ဆိုကြပါစို့။ leverage ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် ရင်းနှီးမြှပ်နှံရန် $2 ပေး၍ အနားသတ် 1:20,000 တွင် ဝယ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်၊ သင်သည်အနားသတ်ဖြင့် ၀ ယ်ရန်သင်၏ပွဲစားထံကနဦးစပေါ်ငွေသို့မဟုတ်ဆင်းပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည် XYZ စတော့ရှယ်ယာများအပေါ် တွန်းအားတက်နေသောကြောင့် သင်သည် 'ကြာရှည်' ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
XYZ ၏ လက်ရှိရှယ်ယာတန်ဖိုးသည် ပေါင် 30.50 ဖြစ်သည်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်၌သင့်တွင်ပေါင် ၁၀၀ သာရှိသည်၊ သို့သော်သင်ပိုမိုရောင်းလိုသည်။
သင်သည် apple leverage ၏ 5:1၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် XYZ စတော့များကို £500 တန်ဖိုးအထိ ဝယ်နိုင်သည်။
ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ XYZ သည် £35.50 (အမြတ် 16.3%) သို့ တိုးလာသည်။
မင်းရဲ့အမြတ်ငွေတွေကို ငွေရှင်းဖို့အတွက် အရောင်းအမှာစာတစ်ခုလုပ်တယ်။
ဒီကိစ္စမှာပေါင် ၁၆.၃၀ နဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ပေါင် ၁၀၀ ကို ၁၆.၃% အမြတ်အစွန်းရတယ်။ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားက ၅: ၁ ကိုမြှင့်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခင်ဗျားရဲ့အမှန်တကယ်အမြတ်က£ 16.3 x 100 = £ 16.30 ။
အကယ်၍ စတော့စျေးနှုန်းသည်တန်ဖိုးမတိုးပါကသင်ငွေဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ သင်၏သြဇာ၏အရွယ်အစားတိုးလာသည်နှင့်အမျှဤဆုံးရှုံးမှုများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စေသည်။
သင်၏စတော့ရှယ်ယာများ ရောင်းဝယ်ခြင်း၏ ကနဦးနေ့များတွင် သင်သည် ငွေရှာမည်မဟုတ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ယင်းအစား သင် ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ leverage ဖြင့် အစုရှယ်ယာများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန် သင်ယူသောအခါ သက်ရောက်မှုများကို နားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကုန်သွယ်ရေးဝေစုမှလေ့လာရန် - စျေးကွက်အမိန့်များ
သင်ပြုလုပ်သောကုန်သွယ်မှုတိုင်းတွင်တစ် ဦး ချင်းအမှာစာနှစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ တစ်ခုမှာဖွင့်ရန်နှင့်နောက်တစ်ခုကိုပိတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ကြာမြင့်စွာအရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလျှင်သင်သည်ဝယ်ရန်အမိန့်ဖြင့်ဖွင့်ပြီးရောင်းနှင့်နီးသည်။
အရောင်းအ ၀ ယ်အနေဖြင့်၊ သင်သည်အရောင်းအ ၀ င်ဖြင့်စတင်ပြီး၊
စျေးကွက် / ကန့်သတ်အမိန့်
အကယ်၍ သင်စျေးကွက်ထဲမှမှာယူမှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါက၎င်းသည်သင်သည်စတော့ရှယ်ယာများ၏နောက်ရရှိနိုင်သည့်စျေးနှုန်းကိုလက်ခံရန်ဆန္ဒရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ အော်ဒါမှာပြီးသည်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသည်ကုန်သွယ်မှုကိုရိုးရှင်းစွာဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကန့်သတ်အမိန့်သည်ပွဲစားသင်၏ကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်သင့်တယ်စျေးနှုန်းအတိအကျကိုသတ်မှတ်ရန်သင့်အားလိုအပ်သည်။ သင်ရွေးလိုက်သောအခါဤစျေးနှုန်းနှင့်လိုက်ဖက်မှုမရှိနိုင်သည့်အခွင့်အရေးအမြဲရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားသင်ဆုံးဖြတ်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်စျေးကွက်ထဲ ၀ င်ထွက်ရန်သို့မဟုတ်ထွက်ခွာရန်အခွင့်အရေးပေးလိမ့်မည်။
Stop-loss order သည်သင့်စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုကိုသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်ထွက်ခွာရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်၊ သင်အနီရောင်ရောက်နေချိန်တွင်။
သင်ရှည်လျားလာသောစျေးနှုန်းသည်သတ်မှတ်ထားသောအဆင့်ထက်လျော့နည်းပါကရောင်း ၀ ယ်ရန်အမှာစာများသည်စျေးကွက်တစ်ခုမှအစပျိုးသည်။ ဤအချက်သည်စျေးနှုန်းသည်ရောင်း ၀ ယ်မှုရပ်တန့်သောစျေးသို့ကျလျှင်ထပ်မံကျဆင်းလိမ့်မည်ဟုယူဆချက်အပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင် 3% ကျသည့်အခါသင်၏အနေအထားမှထွက်ခွာလိုပါက Stop-loss order သည်သင့်ကိုယ်စားပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ဒီတော့အရှုံးကိုရောင်းဈေးမှတ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းဖြင့် တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် Buy-stop အမိန့်များသည်နေရာတိုများကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးထိုသတ်မှတ်ထားသည့်အဆင့်ထက်မြင့်တက်ပါကစတင်လိမ့်မည်။
Stop-loss order သည်လိုက်ဖက်ခြင်းမရှိသောမြင်ကွင်းကို ထပ်မံ၍ လေ့လာသင့်သည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင်၊ သင်သည် 'အာမခံချက်ရှိသော' stop-loss order ကိုလိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ သင်ပိုမြင့်တဲ့ငွေကိုပေးရမယ် ပျံ့နှံ့, ဒါပေမယ့်ပွဲစားက stop-loss စျေးနှုန်းမည်သို့ပင်စျေးကွက်အနေအထားပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်ဟုအာမခံပါလိမ့်မယ်။
တစ် ဦး ကယူအမြတ်အစွန်းအတာ stop- အရှုံးအမိန့်၏အတိအကျပြောင်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ စံပြမြင်ကွင်းတစ်ခုတွင်စျေးနှုန်းသည်သင့်မျက်နှာသာအတွက် ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ကျဆင်းရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုမှောက်လှန်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးအမြဲရှိသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ စျေးနှုန်းသည်အမြတ်အစွန်းနှင့်ကိုက်ညီပါကသင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။
'ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်သောအခကြေးငွေ' ဟူသော အသုံးအနှုန်းသည် ပိုင်ဆိုင်မှုဝယ်ယူခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်းနှင့် ဆက်စပ်ခြင်းမရှိသော ပွဲစားအား သင်ပေးဆောင်သော အခကြေးငွေများနှင့် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် အပ်ငွေအခကြေးငွေ၊ ငွေထုတ်ခနှင့် အကောင့်အခကြေးငွေတို့မှ ပါဝင်ပါသည်။
ဤအရာများထဲမှတစ်ခုသည်သင်၏ရှယ်ယာအရောင်းအ ၀ ယ်အကောင့်သည်လအနည်းငယ်အကြာမလှုပ်မရှားဖြစ်နေလျှင်ပွဲစားများကငွေပေးချေခြင်းမပြုသည့်အခကြေးငွေကိုမှတ်စုတစ်ခုလုပ်လိုပေမည်။
အစုရှယ်ယာကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းအများစုသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုသင်အားသွင်းလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပွဲစားတစ်ယောက်ကကော်မရှင် ၀.၆% ကောက်ခံပြီးစတော့ရှယ်ယာတွေကိုပေါင် ၁၀၀၀ နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပေါင် ၆ ပေါင်ကျလိမ့်မယ်။
သင်ရောင်းခြင်းနှင့်ဝယ်ခြင်းအတွက်ကော်မရှင်တစ်ခုပေးရမယ်ဆိုတာသတိရပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ အကယ်၍ အမြတ်ငွေပေါင် ၁၅၀၀ ကိုအထက်ပါဥပမာတွင်သင်ထပ်တူရောင်းချခဲ့ပါကသင်ပေးရမည့်ကော်မရှင်သည်£ 1,500 ဖြစ်သည်။
စတော့ဈေးကွက်တွင်ပြန့်နှံ့ခြင်းသည်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခုအတွက်ကိုးကားထားသော ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းဈေးတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ XYZ စတော့ရှယ်ယာတစ်လုံးအတွက်အနိမ့်ဆုံးတောင်းသောစျေးနှုန်း (၀ ယ်ယူမှု) သည်ဒေါ်လာ ၁၀ ဖြစ်ပြီး၊ အမြင့်ဆုံးလေလံစျေးနှုန်း (ရောင်းရန်) သည်ဒေါ်လာ ၉.၅၀ ဖြစ်ပါက XYZ ၏ပျံ့နှံ့မှုသည် ၀.၅ ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာစျေးနှုန်းနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်သည် ၅% ဖြစ်သည်။ ဒီကုန်သွယ်မှုမှာတောင်မှချိုးဖဲ့ဖို့အနည်းဆုံး ၅% အမြတ်ရဖို့လိုတယ်။
ယင်းကို သရုပ်ဖော်ရန် - သင်သည် XYZ ၏ရှယ်ယာများကို စတော့တစ်ခုလျှင် $10 ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည်ဟု ဆိုကြပါစို့။
သို့သော်၊ သင်ရှယ်ယာများကိုသင်ဝယ်သောစျေးနှုန်းနှင့်မရောင်းနိုင်သော်လည်းဒေါ်လာ ၉.၅၀ ဖြင့်ရောင်းချနိုင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်အမှန်တကယ် ၅% ဆုံးရှုံးမှုရှိသည်။ သင် ၁၀ ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်းချနိုင်လျှင်တောင်မှသင်ချိုးနိုင်လိမ့်မည်။
အွန်လိုင်းရှယ်ယာများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်သင်ယူရန်မလွယ်ကူသော်လည်းတသမတ်တည်းအမြတ်အစွန်းရရန်အချိန်ယူရသည်။ သင်အမြတ်အစွန်းကိုအမြတ်ရရန်မျှော်လင့်ပါကသင်စိတ်ပျက်မိလိမ့်မည်။ အဲဒီအစား, လေ့လာသူ (နှင့်ဝါရင့်) ကုန်သည်များအားလုံးအရှုံးကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ပြီးပြည့်စုံသော beginner အဖြစ်ဝင်ရောက်လိုသူများအတွက် အွန်လိုင်းကုန်သွယ် ဤနေရာတွင်သင်လိုက်နာနိုင်သောအဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
၁။ Share Trading Site တစ်ခုကိုရှာပါ
အွန်လိုင်းရှယ်ယာများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ပွဲစားစာရင်းတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။ အမြန်အင်တာနက်ရှာဖွေမှုသည်ရာနှင့်ချီသောအွန်လိုင်းပွဲစားများနှင့်သင့်လုပ်ငန်းကိုလိုလားသောကိုယ်စားလှယ်များကိုပြလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤများပြားလှသည့်ရွေးချယ်စရာများသည်လည်းရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။
တစ်ချက်ကြည့်လျှင်၎င်းတို့အားလုံးသည်အလားတူအင်္ဂါရပ်များနှင့်ကိရိယာများကိုပေးနေပုံရသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေး site ကိုမရွေးချယ်ခင်သင့်အိမ်စာကိုလုပ်ရန်လိုသည်။ အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့်အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံစသည့်အွန်လိုင်းသုံးသပ်ချက်များနှင့်အချက်အလက်များနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
သင့်လိုအပ်ချက်များအတွက် မှန်ကန်သောရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးဆိုက်ကို သင်ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန် လိုအပ်သည်။ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ပြီး အသုံးပြုသူအမည်နှင့် စကားဝှက်ကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
အခြားဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့ပင်၊ သင်သည်အစိုးရမှထုတ်ပေးသော ID မိတ္တူကိုတင်ခြင်းအားဖြင့်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
၃။ သင်၏ Account ထဲသို့ရန်ပုံငွေထည့်ပါ
အရောင်းအ၀ယ်ဆိုက်တစ်ခုစီအတွက် ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာများ ကွဲပြားသော်လည်း ၎င်းတွင် ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် အကြွေးဝယ်ကတ်များ၊ ဘဏ်ကြေးနန်း/လွှဲပြောင်းမှု၊ သို့မဟုတ် PayPal၊ Skrill နှင့် Neteller ကဲ့သို့သော အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များ ပါဝင်နိုင်သည်။
အစပြုသူများအနေဖြင့်အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းမှာသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (သို့) ကုန်သွယ်မှုစတင်ရန်သင်ငွေမည်မျှလိုအပ်သည်ဖြစ်သည်။ သင်မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်ကိုကန့်သတ်ချက်မရှိသော်လည်းသေးငယ်သည့်အစပြုရန်ထိုက်တန်ပေသည်။
5 ။ သင့်ရဲ့အမိန့်ချထားပါ
သင်ဝယ်လိုသော သို့မဟုတ် ရောင်းလိုသော စတော့ကို ရွေးပါ။
ကန့်သတ်ချက် သို့မဟုတ် စျေးကွက်မှာယူမှုမှ ရွေးချယ်ပါ။
သင် အသုံးချနေပါက သင်၏ မျိုးစုံကို ရွေးချယ်ပါ။
သင့်ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့ပါးသက်သာစေရန် stop-loss အနေအထားကို ထည့်သွင်းပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Stop-loss သို့မဟုတ် take-profit အမိန့်ကိုသတ်မှတ်ထားပါကရာထူးကိုပိတ်ခြင်းသည်ထိုအတိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကုန်သွယ်ရေးကိုကိုယ်တိုင်ပိတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ သင်၏ကုန်သွယ်မှုမှထွက်ရန်အရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုဝယ်ရန်လိုလိမ့်မည်။ ဤအဆင့်ပြီးဆုံးလျှင်သင်၏ရှယ်ယာကုန်သွယ်မှုအကောင့်လက်ကျန်မှရရှိသောမည်သည့်အမြတ်ကိုမဆိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
အစပြုသူများအတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာသူတို့၏ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာရွေးချယ်မှုများကိုယုံကြည်စိတ်ချရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအစုရှယ်ယာကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေး site ကို ၀ င်ရောက်မည်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီအောက်ပါအချက်များကိုသင်စဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
သင်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံကိုမဖြတ်သန်းမီ၊ သေချာစေရန်ပထမအချက်မှာကုန်သွယ်ပလပ်ဖောင်းကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။ ပွဲစားများအားလုံးသည် လိုင်စင်ကဲ့သို့သော စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များနှင့်အတူ ကိုင်ဆောင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ FCA နှင့် ASIC. ၎င်းတို့၏ အင်္ဂါရပ်များ မည်မျှပင် အသုံးဝင်သည်ဖြစ်စေ စည်းမျဥ်းမထားသည့် ပွဲစားဆိုက်တွင် သင် မပါဝင်ချင်ပါ။ မဟုတ်ရင် မင်းရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာသည်ဘဏ်ကတ်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေကြသည်။ သို့သော်၊ သင်ပြုလုပ်သည့်အခါလွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုစီ၏ကန့်သတ်ချက်များကိုလည်းသင်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းရှယ်ယာရောင်းဝယ်ရေးနေရာတွင်သင်ပေးဆောင်ရမည့်ပြန့်ပွားမှုနှင့်ကော်မရှင်များကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ သင်သည်နိမ့်သောကော်မရှင်နှင့်တင်းကျပ်သောပြန့်ပွားမှုအတွက်သွားနေခြင်းဖြစ်သည်။
သင်အစုရှယ်ယာအရောင်းအ ၀ ယ်၌စလုပ်သောအခါသြဇာမသုံးရန်ရွေးချယ်လျှင်ပင်၊ နောင်တွင်၊ ဤရွေးချယ်စရာကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပွဲစားသည်၎င်း မှစတင်၍ ပံ့ပိုးမှုသေချာအောင်ပြုလုပ်ပါ။
သင်၏တည်နေရာပေါ် မူတည်၍ ပွဲစားကကမ်းလှမ်းသည့်သြဇာပမာဏကိုကန့်သတ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ယူကေနှင့်အီးယူတို့တွင်အစုရှယ်ယာများအပေါ် ၅: ၁ တွင်သြဇာသက်ရောက်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအချို့သောနိုင်ငံများတွင်မည်သည့်ကန့်သတ်ချက်မှမရှိပါ။
အစုရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်ဈေးကွက်တွင်တစ်ခုတည်းသောလှုပ်ရှားမှုကိုတွက်ချက်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုစီအတွက်မှန်ကန်သောသုတေသနပြုကိရိယာများသင်လိုအပ်သည်။ သငျသညျနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချင်တယ်ဆိုရင်, အများအပြားကုန်သွယ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်များကိုလည်းအဆင့်မြင့်ဇယားစာဖတ်ခြင်း tools များပူဇော်။
အခြေခံအားဖြင့်သင်ရရှိရန်အလားတူအရေးကြီးသည် ကုန်သွယ်အကြံပေးချက်များ။aရွေးပါ စတော့ရှယ်ယာကုန်သွယ် အချိန်နှင့်တပြေးညီမွမ်းမံမှုများနှင့်အတူနှစ် ဦး စလုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည့်ဆိုဒ်။
သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောစတော့ရှယ်ယာကိုရွေးပြီးပါက၊ ၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသောသီးခြားလဲလှယ်မှုကမ်းလှမ်းသည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုသင်ရှာဖွေရမည်။ ထို့အပြင်၊ ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတိုင်းသည်သင့်အားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်ခွင့်ကိုပေးသည်မဟုတ်။
များစွာသောကုန်သည်များသည်ကုန်သွယ်ရေးနေရာ၏ရုပ်သိမ်းခြင်းမူဝါဒကိုလျစ်လျူရှုလေ့ရှိသည်။ အချို့ဆိုဒ်များသည်ထုတ်ယူခြင်းများကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန်အချိန်များစွာယူပြီးအခြားသူများကမူအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်။ ထုတ်ယူခြင်းကိုသင်တောင်းခံပြီးနောက် ၄၈ နာရီနောက်မှမပြုလုပ်ဘဲငွေပေးချေမှုပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆိုက်တစ်ခုနှင့်သင်အလုပ်လုပ်လိုသည်။
8 ။ ဖောက်သည်ပံ့ပိုးမှု
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့သင့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဖောက်သည်အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ပွဲစားတစ်ယောက်လိုတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာရိုးရာဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်၏နာရီနှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့်အနည်းဆုံး ၂၄/၅ အခြေခံအားဖြင့်ထောက်ပံ့မှုကိုဆိုလိုသည်။ ယနေ့တွင်ဆိုဒ်များသည်၎င်းတို့အားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစျေးကွက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း (သို့) အီးမေးလ်မှတဆင့်အထောက်အပံ့ပေးရန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။
အစောပိုင်းတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောထိပ်တန်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းငါးခုစာရင်းကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ငါးယောက်စလုံးသည်အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးအောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည် -
နည်းပါးသော ပျံ့နှံ့မှုနှင့် ကော်မရှင်များကို ပေးသည်။
တိုတောင်းသော အရောင်းအ၀ယ်ကို ခွင့်ပြုသည်။
၄။ AVATrade - ၂ x ဒေါ်လာ ၂၀၀ စတော့အိတ်ချိူ့အပိုဆု
AvaTrade သည် အာကာသအတွင်း သက်တမ်းအရင့်ဆုံး အွန်လိုင်းပွဲစားလုပ်ငန်းစုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကုမ္ပဏီအား အဆင့်-၁ နှင့် အဆင့်-၂ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာသုံးရပ်ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပြီး စတော့ရှယ်ယာများ၊ Forex နှင့် အခြား CFD ထုတ်ကုန်များအတွက် ဘေးကင်းပြီး အန္တရာယ်နည်းပါးသော ပွဲစားတစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် ပျံ့နှံ့မှုများအတွက် ပြောင်းလဲနိုင်သောစျေးနှုန်းကို ပေးဆောင်သည်။ စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြမှုများကို သင်တွေ့နိုင်သော်လည်း စာရင်းရှိ အခြားကုန်သွယ်ဆိုဒ်များတွင် ရရှိနိုင်သော အဆင့်မြင့်သုတေသနကိရိယာများကို သင်မတွေ့နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှယ်ယာများလမ်းညွှန်ရောင်းဝယ်မှုကိုလေ့လာခြင်း၌လေ့လာတွေ့ရှိရသောကြောင့်စပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာရန်အချိန်ယူနိုင်သည်။ သတင်းကောင်းမှာစတော့ရှယ်ယာများပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တက်ကြွ။ passive နည်းဗျူဟာများကိုအသုံးချနိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ရှယ်ယာနှင့်အတူ ကုန်သွယ်.
အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရှိရန်လိုအပ်သည့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြပေးထားပါသည်။ သင်ရွေးချယ်သောကုန်သွယ်ရေး site သည်သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာအားလုံးကိုကမ်းလှမ်းပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမပြုမီအန္တရာယ်များကိုနားလည်အောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင် 'ကုန်သွယ်ခြင်း' နှင့်ဆက်ဆံသည့်အခါနောင်တွင်စတော့ရှယ်ယာများ၏ ဦး တည်ချက်ကိုသင်ခန့်မှန်းနေသည်။ CFDs များကဤအရာကိုအထောက်အကူပြုသဖြင့်သင်သည်ခွဲဝေယူပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
ပုံမှန်ရှယ်ယာအရောင်းအ ၀ ယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည် AML ဥပဒေများကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်သင်၏အစိုးရမှထုတ်ပေးသော ID နှင့်စစ်ဆေးရန်လိုသည်။
အနည်းဆုံးပမာဏသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ကုန်သွယ်မှု site ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကုန်သွယ်စတော့တွင်မည်သည့်အခကြေးငွေများပါ ၀ င်ပါသနည်း။
ပွဲစားများသည်ကော်မရှင်များ၊ ပြန့်ပွားမှုများ၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများနှင့်ကုန်သွယ်မှုမဟုတ်သောအခကြေးငွေများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောအခကြေးငွေများကိုကောက်ခံသည်။
CFD အရောင်းအ ၀ ယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးသည်ရှယ်ယာများကိုသြဇာသက်ရောက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏သြဇာအကန့်အသတ်ကိုသင်၏တည်နေရာနှင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်လက်လီဝယ်သူဖောက်သည်) ကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်စတော့ရှယ်ယာတစ်ခု၏တန်ဖိုးကိုကျဆင်းသွားလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်လျှင်သင်၏ပွဲစားနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းအမိန့်ကိုစတင်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ သင်အမြတ်အစွန်းရရှိပြီးနောက်ကုန်သွယ်မှုကို ၀ ယ်ရန်အမှာစာပေးခြင်းဖြင့်ပိတ်ပါ။
ရရှိနိုင်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည်ကုန်သွယ်ရေးနေရာတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားခြားနားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည် debit / credit cards, bank account သို့မဟုတ် e-wallets ကိုသုံးရန်ရွေးချယ်စရာများကိုရှာနိုင်သည်။ ။